လွှမ်းပိုင် - ဂီတစာဆို [2014 Album] - Mg Shan Lay
Home 320 Kbps! Bobby Soxer Bunny Phyoe High Quality Lil Z ရဲရင့်အောင် လွှမ်းပိုင် အိမ့်ချစ် လွှမ်းပိုင် - ဂီတစာဆို [2014 Album]
လွှမ်းပိုင် - ဂီတစာဆို [2014 Album]
12:22:00 PM 320 Kbps!, Bobby Soxer, Bunny Phyoe, High Quality, Lil Z, ရဲရင့်အောင်, လွှမ်းပိုင်, အိမ့်ချစ်,
8. မင်းရဲကျော်စွာ ဗိုလ်နေတိုး
9. တစ်ခါက တက္ကသိုလ်
12. လက်တွေမြှောက် [Feat. Bobby Soxer]
13. ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ကောင်မလေး [Feat. Bunny Phyoe]
14. ကိုကို [Feat. အိမ့်ချစ် + Bobby Soxer]
15. ဗမာသည်သာ ပထမ [Feat. Lil Z]
16. ဘော်ဒါမကောင်းသူကောင်းမဖြစ် [Feat. ရဲရင့်အောင်]
320 Kbps နဲ့ဒေါင်းချင်ရင် [ဒီနေရာကိုသွားနော်] . . . .
Tags # 320 Kbps! # Bobby Soxer # Bunny Phyoe # High Quality # Lil Z # ရဲရင့်အောင် # လွှမ်းပိုင် # အိမ့်ချစ်
Labels: 320 Kbps!, Bobby Soxer, Bunny Phyoe, High Quality, Lil Z, ရဲရင့်အောင်, လွှမ်းပိုင်, အိမ့်ချစ်
Dream Boat June 13, 2014 at 5:54 AM
အကို beautiful ပါမလာဘူး။
Disco2ပုဒ်ထပ်နေတယ်
Mr.Shan Lay June 13, 2014 at 4:51 PM
Ye'Bhone Naing June 14, 2014 at 1:03 AM
Mr.Shan Lay June 14, 2014 at 10:22 AM
ဟုတ်ကဲ့ လိုင်းကောင်းရင်တင်ပေးမှာပါဗျာ . . :)